भेरी अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारका क्रममा मृ,त्यु भएपछि अफान्तले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लखेटी लखेटी कु,ट्पि,ट गरे, डक्टर र नर्स ज्यान जोगाउन २ तलाबाट हामफाले! – Khabar 27 Media
भेरी अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारका क्रममा मृ,त्यु भएपछि अफान्तले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लखेटी लखेटी कु,ट्पि,ट गरे, डक्टर र नर्स ज्यान जोगाउन २ तलाबाट हामफाले!
May 28, 2021 May 28, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on भेरी अस्पतालमा सङ्क्रमितको उपचारका क्रममा मृ,त्यु भएपछि अफान्तले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लखेटी लखेटी कु,ट्पि,ट गरे, डक्टर र नर्स ज्यान जोगाउन २ तलाबाट हामफाले!
October 7, 2021 Shyam Lama
राजसंस्थाविनाको प्रजातन्त्र टिक्दैन भन्नु जनतालाई तातो बरफ खोज्न लगाउनु जस्तै हो : डा. भट्टराई
October 12, 2021 October 12, 2021 Shyam Lama
साहुले चलाएकाे बस दु,र्घटना : चालककाे श्रीमतीसहित दुईको मृ,त्यु
October 17, 2021 October 17, 2021 Shyam Lama